तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको अधिवेशन : व्यवसाय, पार्टी, अनि ग्रुपिजम्‘ - Goraksha Online
‘सर्नेभन्दा नसर्ने रोगको धेरै जोखिम’
दृष्टिविहीन परिवारलाई खाद्यान्न र लत्ताकपडा…
घोराही–लमही सडकमा बिजोग : सडकका खाल्लाले दुर्घटनाको जोखिम
कहिले व्यवस्थित होला तुलसीपुर ?
अकुलोप्लाष्टिक सेवा अब दाङमै
जीर्ण भवनमा पढ्दै विद्यार्थी
‘दाङमा जनप्रतिनिधि नै लगाउन मान्दैनन् कोभिड–१९ विरुद्धको खोप’
‘व्यवसायको लागि समय बाधक बन्दैन’
संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला
फेरि साइनबोर्ड कर…
स्थानीय तहमा राजश्व संकलन न्यून
पर्यटकिय केन्द्र बन्दै ‘जखेरा’
महासंघका उपाध्यक्ष पोख्रेल सुर्यभक्त पतनादेवी स्मृति राष्ट्रिय पत्रकारीता पुरस्कारबाट सम्मानित
एकलाख बराबरको चोरी गरिएको रिचार्ड कार्डसहित एक किशोर पक्राउ
बैशाखमा निर्वाचन हुन सक्दैनं : महामन्त्री कोइराला
विदेश भन्दा स्वदेश ठिक …
तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको अधिवेशन : व्यवसाय, पार्टी, अनि ग्रुपिजम्‘
तुलसीपुर, ३० माघ । घोराहीमा हुस्सु लागिरहँदा तुलसीपुरमा बिहीवार विहानै घाम लागेको थियो । भैरहवा र नेपालगञ्जको हवाइ यातायात सेवा लिने प्रदेश सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी यसपाली तुलसीपुरकै विमानस्थलमा उत्रे । तर यो उनको बाध्यता थियो, अनि छैठौं फ्लाइट पनि थियो ।
महरा पनि यही फ्लाइटमा धेरै चोटी अवतरण गरे । तर व्यवसायीहरुले माग गरेअनुसार विमानस्थल सुधार हुनुको साटो सरकारले फेरि वैकल्पिक विमानस्थलको अवधारणा ल्याएको छ । डिपिआरका लागि सायद बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । तर यहाँको विमानस्थल उडानको समस्याले कमजोर देखाइँदै छ ।
अर्को समृद्धिको पाटो भनेको तुलसीपुरलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोड्नुको वैकल्पिक एवं सुनिश्चित एवं छोटो दुरीको तुलसीपुर–हापुरे–सुर्खेत राजमार्गको स्तरोन्नति थियो । त्यसमा दाङ उद्योग वाणिज्य संघले तीन जिल्लाका सडक कार्यालय, जिल्ला विकास समितिका अधिकारी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई पनि समावेश गराइएको थियो ।
तर दश बर्षसम्म पनि उनासी किलोमिटर बाटो नबन्दा अनि नचल्दा राज्यलाई कति इन्धन खपत बढिरहेको छ भन्ने विषय तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको मुद्दा थाँती रहेको छ । देखिन थालेको छ, व्यवसायीहरुबीच पार्टी, तालमेल र ग्रुपिजम… ।
तुलसीपुरको सुरक्षाको एउटा समस्या कुटनीतिक नियोगका ट्राभल एड्भाइजरीमा सुरक्षित तुलसीपुर बनाउने, अर्को कुरा हवाइसेवालाई बढाउँदै लैजाने त्यसपछि बल्ल आन्तरिक व्यवस्थापनका कुरा आउँछन् । सडक विस्तारभन्दा पनि पछिल्लो समयमा सडक व्यवस्थापनको कुरा हो ।
असन र न्युरोडभन्दा फराकिला सडक हुँदाहुँदै अहिले सडक विस्तारभन्दा पनि व्यवस्थापनमा व्यवसायी लाग्नुपर्ने हो कि होइन ? तर कसैले घर फालौं भन्छन्, कसैले मैले फाल्दैन भन्छन्, अनि सडक स्तरोन्नतिको काम रोकिएको छ । तर यो विषयमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरु फुटेका छन् । व्यवसायी जुट्न सकिरहेका छैनन् ।
क्लबको घोषित उम्मेदवार कोही हुन सक्दैन, परिवारबादको उम्मेदवार पनि कोही हुन सक्दैन, अनि राजनीतिक दलले सिफारिस गरेको उम्मेदवार पनि बलियो हुन सक्दैन । सकेसम्म निषेधको राजनीतिलाई अन्त गर्ने सर्वसम्मत उम्मेदवारको चयन हुनुपथ्र्यो । तर खासमा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व व्यवसायीहरुको इच्छाले चयन हुन सकेको छैन ।
यो बर्ष पनि व्यवसायीहरु विभाजित हुँदै गर्दा राजनीतिक दलहरु पनि विभाजित भएर व्यवसायीको चाकरीमा लाग्नसमेत बाध्य भए । पार्टीको मिशनभन्दा पनि यो व्यवसायी मेरो, ऊ उसको भन्ने सवालमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन सकेन । अन्ततः अहिले तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ चुनावी मैदानमा छ । यसमा आम व्यवसायीहरुले दलीय प्रभावलाई कत्ति पनि स्वीकार गर्ने छैनन्, आवश्यकताका आधारमा नेतृत्व ल्याउनेछन् भन्ने पनि नागरिक अभिव्यक्ति छ । यो हेर्न अझ बाँकी छ ।
नेकपा फुटेको अवस्थामा कांग्रेस फुटेको छैन । तर कांग्रेसमा पनि आन्तरिक समस्या त छँदैछ, तर यो निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले अधिकतम प्रयास गरिरहँदा पनि केही झिना–मसिना समस्या सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । उम्मेदवार तोक्ने विषयमा पनि केही समस्या थिए तर त्यसलाई व्यवसायीहरुकै ग्रुपिजमले बिगारेका एक नेताले बताए ।
दीपक गिरी, गेहेन्द्र गिरी, खिमप्रसाद खराल, केशव आचार्य पार्टीका नेता हुन् । उनीहरुसँगै क्षेत्रीय सभापति जगत खड्का र राजनीतिमा जोडिएका अन्य पार्टीका पूर्व सभापति र नेताहरुसँगै महिला नेतृहरुले समेत तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघमा चासो देखाएका छन् । तर कांग्रेसमै आवद्ध व्यवसायीहरुको समस्याका कारण सर्वसम्मत नेतृत्व किन हुन सकेन ? यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यसमा कांग्रेस नेता र व्यवसायीहरु, कांग्रेस र प्रेस युनियनबीचको सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्ने अर्का व्यवसायीले बताएका छन् ।
पार्टी विभक्तको संघारमा पुगिसकेको अवस्थामा पनि नेकपा एकाकार भएको सन्देश दिँदै प्यानल खडा गरेको छ । नेकपाले विद्रोही उम्मेदवार उठाएको पनि छैन । नेकपाले चुनाव जित्ने अठोट पनि गरेको छ । नेकपाको समीकरणका लागि उनीहरुको व्यापार संगठनले गरेको निर्णय सर्वोपरी भएको छ ।
तुलसीपुर नगरसचिवले निर्णय गर्दै गर्दा घोराही नगरसचिव गेहेन्द्र बस्नेत र उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य ध्रुव श्रेष्ठ भारीले पनि चासो देखाउँदै समन्वयकारी भूमिकामा रामप्रसाद चालिसेलाई उठाए । तर कांग्रेसको यो अवस्था अझै पनि गौण देखियो ।
अनुपकुमार श्रेष्ठ एउटा असल, सरल र सौहार्द व्यवसायी थिए । उनी दाङ उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्ष एवं कुशल व्यवसायी तोरणध्वज श्रेष्ठका छोरा पनि हुन् । विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आवद्ध छन् । सामाजिक सेवामा उनले कहिल्यै हात झिकेका छैनन् । सहयोगको प्रतिफल पनि खोज्दैनन्, तर उनलाई खल्तीको उम्मेदवार किन बनाइयो, धेरै व्यवसायीहरुले यही सोधिरहेका छन्, बजारमा ।
तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व सम्हाल्नका लागि अर्कोपटक पहल गर्ने अहिले सहजीकरण र समीकरण मिलाउन लागिरहेका युवा व्यवसायी विनिल केसीको महासचिव पदका लागि पनि फेरि अर्का उम्मेदवारलाई उठाइएको छ, । अर्का उम्मेदवार केशव केसी पनि होनहार युवा हुन् । तर पार्टीले उनलाई अर्को कुनै स्पेश दिनुपर्छ कि कारबाहीको चेतावनी । कोषाध्यक्ष पदका उम्मेदवार देवबहादुर केसीलाई नेपाली कांग्रेसले उपाध्यक्षमा टिकट दिइसकेको थियो ।
तर उनी फेरि व्यवसायीहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचन गराउन सक्ने भन्दै कसैको संकेतमा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिएर कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए । अहिले उनले पनि त्यो रियलाइज गरिसकेका छन् । उनी भन्छन्– ‘केही नेताको संकेत कोषाध्यक्षमा आउनुपर्दछ भन्ने थियो, त्यसैले यो पदमा उम्मेदवारी दिएँ ।’ कुन नेताले के संकेत गर्छन् र के हुन्छ भन्ने निर्णय आम व्यवसायीहरुले गर्नेछन् । देवबहादुर केसीलाई उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा आउन कुनै समस्या छैन, तर नेतृत्वकै समस्याले बरालिएका हुन् ।
उनको विषयमा अब पार्टीले भन्दा पनि व्यवसायीहरुले मत दिएर न्याय गर्नेछन् भन्ने व्यवसायीहरुको बुझाइ छ । डिजाइन र सेटिङले अब तुलसीपुर चल्दैन, पार्टीले हस्तक्षेप गरेर पनि चल्दैन, त्यसका लागि व्यावसायिक एकता मात्रै अहिलेको आवश्यकता हो’, तुलसीपुरको बीरेन्द्रचोकका एक व्यवसायीले भने ।
समीक्षालयबाट शुरु भएको ¥याली
यसैबीच सर्वसम्मत निर्णग गर्नका लागि अधिकतम् पहल गरेका कांग्रेस नेता केशव आचार्य र प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघका अध्यक्ष जनक खरालको नेतृत्वमा समीक्षालयबाट मत माग्ने अभियान शुरु भएको छ ।
कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार टेकनप्रसाद बस्नेतलाई जिताउनका लागि कांग्रेस सभापति कीर्तिबहादुर खड्का, संविधानसभा सदस्य बृद्धिराम भण्डारी, क्षेत्रीय सभापति जगत खड्का, नेता केशव आचार्य, तुलसीपुरका केही जनप्रतिनिधिहरु पनि सहभागी भएका थिए ।
त्यसैगरी अर्का अध्यक्षका प्रत्यासी रामप्रसाद चालिसेको नेतृत्वको टोली पनि चुनावी घरदैलो अभियानमा रहेको छ । चालिसे पनि उद्योग वाणिज्य संघका वर्तमान उपाध्यक्ष हुन् । उनलाई पार्टीले सँगै आम व्यवसायीहरुले पनि स्वच्छ नेतृत्वका रुपमा लिइरहेका छन् ।
उनका पछिका नेतृत्व को–को छन् भन्दा पनि चालिसेलाई भने स्वच्छ व्यावसायिक छवि भएका रुपमा लिइरहेको नेपाल व्यापार संगठनमा आवद्ध एक व्यवसायीले बताएका छन् । हेरौं, चुनावमा कसको पल्ला भारी हुन्छ ? जसले जिते पनि व्यवसायीकै जित हुने तर्क आम व्यवसायीहरुले दिएका छन् । व्यावसायिक समृद्धि र एकता आम व्यवसायीले खोजिरहेका छन् ।
पथरगढवामा काग्रेस पार्टी कार्यालय स्थापना
एक दशक ‘दलित मुुक्ति दशक’